Real Player ရယူရန်
Window Media ရယူရန်
နှစ်အပိုင်းအလိုက် 2010 ခုနှစ်ထုတ်လွှင့်ချက်များ 2011 ခုနှစ်ထုတ်လွှင့်ချက်များ 2012 ခုနှစ်ထုတ်လွှင့်ချက်များ 2013 ခုနှစ်ထုတ်လွှင့်ချက်များ 2014 ခုနှစ်ထုတ်လွှင့်ချက်များ 2015 ခုနှစ်ထုတ်လွှင့်ချက်များ
ABC Radio Australia မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကိုနေ့ စဉ်အားပေးနားဆင်နေကြသော သောတရှင်များ
ABC Radio Australia မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ် Website အသစ်ကို ABC Radio Australia မှ
နေ့ စဉ်ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းများ ၊ ကျန်းမာရေးပညာပေးအစီအစဉ်များ ၊ နိုင်ငံရေး ၊လူမှုရေး ၊
ဘာသာရေး ၊ အထွေထွေ ဗဟုသုတ များ စုံလင်စွာဖြင့် ခန့် ခန့် ငြားငြား၊ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ
ထုတ်လွှင့်ထားပြီးဖြစ်ပါသည် သို့ ဖြစ်ပါ၍ ABC Radio Australia မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကို
အောက်ဖော်ပြပါ Website link ကို သွားရောက် ကြည့်ရှုနားဆင်တော်မူနိုင်ကြပါကြောင်း
ချစ်သောတရှင်များကို သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်၊၊ : : : : : : : : : : ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
Kevin Rudd spoke about his first visit Burma on an exclusive interview with Radio Australia Burmese Service. He spoke about his meeting with President U Thane Sein and Aung San Suu Kyi.
သြစတြေးလျ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ကယ်ဘင်ရဒ် က ရေဒီယို သြစတြေးလျ မြန်မာ ပိုင်း အစီ အစဉ် ကို သီး သန့် အချိန်ပေး ၍ ဆက်သွယ် မေးမြန်းခြင်း များ ကို မြန်မာ နိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့ ဒေါ်အောင်ဆန်း စု ကြည် နှင့် တွေ့ ဆုံ အပြီး မှာ ပြန်လည် ဖြေ ကြား ထား ခြင်း
စိတ်ရောဂါ အထူးကုသမားတော်ကြီး ဒေါက်တာတင့်ဝေရဲ့ ပညာပေး အစီအစဉ် များ။
အထွေထွေကုဆရာဝန် ဒေါက်တာမြင့်ထွန်းရဲ့ကျန်းမာရေး ပညာပေး
ABC RADIO AUSTRALIA ( မြန်မာဌာန ) မှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အင်တာဗျူးများ
Kevin Rudd နှင့်ဒေါ်ခင်မာဝင်းအင်တာဗျူး
Ramos Horta နှင့် အောင်ဆန်းစုကြည်အင်တာ
Jan 2012 01/01/2012 02/01/2012 03/01/2012 04/01/2012 05/01/2012 06/01/2012 07/01/2012 08/01/2012 09/01/2012 10/01/2012 11/01/2012 12/01/2012 13/01/2012 14/01/2012 15/01/2012 16/01/2012 17/01/2012 18/01/2012 19/01/2012 20/01/2012 21/01/2012 22/01/2012 23/01/2012 24/01/2012 25/01/2012 26/01/2012 27/01/2012 28/01/2012 29/01/2012 30/01/2012 31/01/2012
February 2012--- 01/02/2012 02/02/2012 03/02/2012 04/02/2012 05/02/2012 06/02/2012 07/02/2012 08/02/2012 09/02/2012 10/02/2012 11/02/2012 12/02/2012 13/02/2012 14/02/2012 15/02/2012 16/02/2012 17/02/2012 18/02/2012 19/02/2012 20/02/2012 21/02/2012 22/02/2012 23/02/2012 24/02/2012 25/02/2012 26/02/2012 27/02/2012 28/02/2012 29/02/2012
March 2012 01/03/2012 02/03/2012 03/03/2012 04/03/2012 05/03/2012 06/03/2012 07/03/2012 08/03/2012 09/03/2012 10/03/2012 11/03/2012 12/03/2012 13/03/2012 14/03/2012 15/03/2012 16/03/2012 17/03/2012 18/03/2012 19/03/2012
Copyright ©2010 All Rights Reserved ---New Sky Advertising www.new-sky.info
The best Browser for this Website is Mozilla Fire Fox